Uyibala njani iMbuyekezo kwiNtengiso yeNtengiso yezeNtlalo | Martech Zone
Uyibala njani iMbuyekezo kwiNtengiso yeNtengiso yezeNtlalo
NgoMvulo, Agasti 27, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Njengoko abathengisi kunye namaqonga eendaba ezentlalo bekhula, sifumana okuninzi malunga nokuphakama kunye nokuphazamiseka kokutyala imali kwimidiya yoluntu. Uya kubona ukuba ndihlala ndigxeka okulindelweyo ngabacebisi beendaba zosasazo- kodwa oko akuthethi ukuba ndigxeka imidiya yoluntu. Ndigcina iitoni zexesha kunye nomzamo ngokwabelana ngobulumko noontanga kunye nokuthetha ngeempawu ezikwi-Intanethi. Andithandabuzi ukuba ixesha lam endilichithe kwimithombo yeendaba zentlalo ibilotyalo mali olukhulu kwinkampani yam, ukupapashwa kwam, kunye nomsebenzi wam.
Umcimbi ngumba wolindelo kunye nomlinganiso, nangona kunjalo. Nanku umzekelo: Umthengi ukhalaza ngeTwitter kwaye inkampani iphendula kwangoko, ilungisa kakuhle umba kumthengi ngendlela efanelekileyo nangexesha elifanelekileyo. Abaphulaphuli babathengi babona indlela yokuziphatha kwaye ngoku banembonakalo entle yenkampani. Uyilinganisa njani imbuyekezo kwinzaliso-mali? Ngexesha elingaphezulu, unokukwazi ukulinganisa uluvo lwegama lakho kunye nokunxibelelanisa noko kwingeniso kunye nokugcinwa… kodwa akukho lula.
I-44% yee-CMOs khange zikwazi ukulinganisa ifuthe losasazo lwentlalo kwishishini labo. Nangona kunjalo, inokufikelelwa ngokupheleleyo kuzo zonke iifemu
Rhoqo kunoko, iinkampani zifuna ukulinganisa intengiso yemidiya yoluntu ROI ngokuthe ngqo ukhuphele, idemo, ubhaliso, okanye ukuthengisa kuTwitter okanye kuhlaziyo lwe-Facebook. Ngelixa lelona lawulo liphantsi kumajelo eendaba ezentlalo i-ROI, ayisoloko ichanekile. Ngaba amathemba akho aya kwimidiya yoluntu ukuze uthenge imveliso okanye inkonzo yakho? Kuthandabuzeka kakhulu kumashishini amaninzi-nangona oko kusenzeka amaxesha ngamaxesha.
Amanyathelo ama-4 okuLinganisa iMbuyekezo kwiNtengiso yeNtengiso yezeNtlalo
Gcina ukhumbule ukuba ngekhe ubenazo ezi zinto ngexesha othathe isigqibo sokuqalisa ukulinganisa. Isenokufuna ukuba usete izixhobo kunye nohlahlo-lwabiwo mali ukuze usebenze kwimithombo yeendaba zentlalo ubuncinci iinyanga ezimbalwa ukumisela ukuba yintoni imbuyekezo yakho.
Chaza iinjongo ezingqinisisekayo -Ingaba lula njengokwakha ulwazi okanye ukuya phambili kakhulu kuthethathethwano, igunya lokwakha, ukuguqula, ukugcina, ukunyusa, okanye ukuphucula amava abathengi ngokubanzi.
Nika ixabiso kwiNtshukumo nganye - Lo ngumsebenzi onzima, kodwa yintoni ixabiso lokufundisa, ukubandakanya, kunye nokunceda abathengi bakho kwimidiya yoluntu? Mhlawumbi ukwahlula amathemba akho kunye nabathengi-uthelekisa abo balandelayo kunye nokuzibandakanya nawe kwi-intanethi kuthelekiswa nabo bangakwenziyo. Ngaba kukho ukugcinwa okwandisiweyo? Ukonyusa amathuba okuthengisa? Ixesha elikhawulezayo lokuvala? Ubungakanani obukhulu beekhontrakthi?
Bala iindleko zeMizamo yakho - Lifuna ixesha elingakanani kwaye oko kuguqulela njani kumqeshwa nakulawulo? Uchitha malini kumaqonga ukulawula imidiya yoluntu? Uchitha malini xa ubuyisela imali okanye usaphula imiba yenkonzo yabathengi? Ngaba uchitha nayiphi na imali kuphando, uqeqesho, iinkomfa, njl. Zonke kufuneka zibandakanywe kulo naluphi na ubalo lwe-ROI.
Misela i-ROI - ((Ingeniso iyonke inegalelo kumajelo eendaba ezentlalo- Iindleko zeNtlalontle zizonke) x 100) / Iyonke indleko zeendaba zoLuntu.
Nantsi i-infographic epheleleyo evela kwi-MDG, egubungela indlela yokuchaza iinjongo ezingqinisisekayo, ukwabela ixabiso lomsebenzi ngamnye, kunye nokubala iindleko zizonke zemizamo yakho Ungayilinganisela njani i-ROI yeendaba zeNtlalo:
tags: kwi-infographicmdgukubuya kutyalo maliROIisenzo semidiya yoluntuimisebenzi yemidiya yoluntuiindleko zemidiya yoluntukwimidiya yoluntuimidiya yokuncokola roiIxabiso leendaba ezentlalo
Ihluleka njani iMartech Stack yokuNceda uMthengi